Mogadishu Journal » WHO oo shaacisay warbixin ceeb iyo fadeexad ku ah Soomaaliya & dalal kale - Idman news
Mogadishu Journal » WHO oo shaacisay warbixin ceeb iyo fadeexad ku ah Soomaaliya & dalal kale
Sida ay sheegtay heyadda WHO dalalka Kenya, Zimbabwe, Uganda, Soomaaliya iyo Nigeria ayaa safka hore kaga jira kiisaska musuq-maasuq ah ee lagu sameeyey qalabka iyo kharashkii loogu tala galay la dagaalanka cudurka Coronavirus.
Sidoo kale waxaa warbixinta lagu cadeeyay inay jiri karaan dalal badan oo kale oo ku kacay musuqmaasuqa lacagtii ay hey’addu ugu tala gashay la dagaalanka cudurka COVID-19.
Agaasimaha guud ee ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) Tedros Adhanom ayaa sheegay in musuqmaasuqa qalabka badqabka shaqaalaha caafimaadka uu lamid yahay dil.
“Heer kasta ama nooc kasta oo musuq maasuq lama aqbali karo. Si kastaba ha noqotee, musuq maasuqa la xiriira qalabka badqabka shaqaalaha caafimaadka aniga ahaan runtii waa dil. Sababtoo ah, haddii shaqaalaha caafimaadku shaqeeyaan bilaa qalab, waxaan qatar galineynaa noloshooda taasna waxay sidoo kale halis gelineysaa nolosha dadka ay u adeegaan. Marka waa dambi waana dil” ayuu yiri Dr. Tedros Adhanom.
Siyaasiyiin ka tirsan Mucaaradka ayaa horey ugu eedeeyey dowlada Somalia gaar ahaan Wasaarada Caafimaadka iney musuqday qalabkii iyo dhaqaalihii loogu talo galay la dagaalanka cudurka Coronavirus inkastoo dowladu iska fogeysay eedeyntaas.
Previous Wasiir Goodax oo sharraxay sababta ay ardayda Muqdisho ugu dhaceen imtixaanka – Hornpost
Next Goodax Barre oo sharaxaad yaab leh ka bixiyey sababta fashilka ardayda Muqdisho
Kooxo hubeysan oo boosaaso ku dilay Taliye Barkhad Maxamed Jaamac. – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
26 mins ago Mohamoud
Ciidamo ka tirsan Gorgor iyo Haramcad oo lagu Daabulay Beledweyne. – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
50 mins ago Mohamoud
Axmed Aadan Axmed oo ku guuleystay kursiga Tirsigiisu yahay HOP-127. – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Neymar Jr oo sharraxay sababtii uu ugu laaban rabay naadigiisii hore ee Barcelona xagaagii 2019 – Gool FM
Kooxo hubeysan oo boosaaso ku dilay Taliye Barkhad Maxamed Jaamac. – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia January 26, 2022
Ciidamo ka tirsan Gorgor iyo Haramcad oo lagu Daabulay Beledweyne. – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia January 26, 2022
Neymar Jr oo sharraxay sababtii uu ugu laaban rabay naadigiisii hore ee Barcelona xagaagii 2019 – Gool FM January 26, 2022
Axmed Aadan Axmed oo ku guuleystay kursiga Tirsigiisu yahay HOP-127. – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia January 26, 2022
Man City oo Dhammeystirtay saxiixa xiddig bartilmaameed u ahaa Man United iyo Liverpool… (Ogow qiimaha ay kula wareegeyso iyo xilliga uu Etihad imaanayo) January 26, 2022